सोमबारको दिनमा यस्ता क्रियाकलाप गर्नाले मनोकामना पुरा हुनुको साथै शुख,शान्तीसंबृद्ध प्राप्त हुने. - E ALL NEPAL
सोमबारको दिनमा यस्ता क्रियाकलाप गर्नाले मनोकामना पुरा हुनुको साथै शुख,शान्तीसंबृद्ध प्राप्त हुने.
हाम्रो घरमा रहेको नकारात्मक शक्तिका कारण हाम्रो दिमाखमा पनि नकारात्मक सोच मात्र पैदा हुने गर्दछ। नकारात्मक सोचका कारण हरेक काममा बाधा अड्चन आइपर्छ। यस्ता बाधा अड्चनबाट बच्न अपनाउनुहोस यस्ता उपाय:
१, पुर्णिमाको दिन घरमा गौमुत्र छर्कीदिनुहोस। यदि हरेक दिन गौ मुत्र छर्किन सक्नुहुन्न भने यस्तै पुन्य तिथि पुर्णिमा दिन छर्कीदिनुहोस। यसले बातावरणमा मौजुद नकारात्मक शक्ति खत्तम हुने गर्दछ। घरको माहोल पवित्र हुने गर्दछ।
२,बिहान बेलुका घिउको दीपक र कपुर बाल्नुहोस्। कपुर र दीपकको उज्यालो र यसबाट निस्कने धुँवाले बातावरणमा सकारात्मकता पैदा हुन्छ।
३, हरेक दिन बिहान रंगोली बनाउनुहोस् यसले घरमा रहेको नकारात्मक शक्ति खत्तम हुन्छ र यसले देख्दा हामीमा सकारात्मक सोच पैदा हुने गर्दछ।
४, घरको कुना-कुना सफा गर्नुहोस। घर फोहोर छ भने जतिसुकै पुजापाठ गरेपनि सकारात्मक उर्जा पैदा हुन् सक्दैन।
५, पुर्णिमाको रात घरमा महालक्ष्मीको साथै भगवान बिष्णुको पुजा गर्ने गर्नुहोस्।
६,कुनै शिव भगवानको मन्दिरमा गएर दीपक जलाईदिनुहोस् र ऊँ रुद्राय नम: मंत्रका जप गर्नुहोस।
सोमबारको भगवान शिवको पूजा गरीन्छ । सोमबारको दिन भगवान शिवको पुजा गर्नाले सम्पूर्ण मनोकामना पुरा हुने विश्वास छ । नारद पुराणका अनुसार सोमवारको दिन भगवान शिवको व्रत गर्नु भन्दा पहिला बिहान उठेर नुहाएर भगवान शिव माथि जल र बेलको पत्र चढाएर शिव पार्वतीको पूजा गर्नु राम्रो मान्छि ।
शिवको पूजापछि उहाँको व्रत कथा सुन्नु लाभदायी मान्छि । उपासनाको दिन एक समय मात्र खाना खानु उत्तम मान्छि । शिवजीको पूजाको दिन सरल र सफा मनले ध्यान गरेर भगवानको आहवान गर्नाले आर्शीवाद प्राप्त हुने जनविश्वास रहेको छ ।
नेपालमा रेल पनि आउँछ, जहाज पनि चल्छ : स्टेशन टिकट काउन्टर सबै खुल्छ : प्रधानमन्त्री ओली
डडेल्धुरा सदरमुकाममा फेरी भिषण आगलागी , ९ पसल जले आगो लगाउने एक जना पक्राउ